Meelaha safarka ugu jaban ee laga dukaameysto Louis Vuitton, Cartier, Chanel, Gucci iyo Prada
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Shopping » Meelaha safarka ugu jaban ee laga dukaameysto Louis Vuitton, Cartier, Chanel, Gucci iyo Prada
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Fashion • Warshadaha Warshadaha • Wararka Raaxada • News • jiga • Waajib ah • Shopping • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
USA waa mid ka mid ah wadamada ugu jaban ee iibsada moodada naqshadeeye, iyada oo inta badan alaabada moodada sare ku kacaa ugu yar Mareykanka.
USA waa wadanka ugu fiican ciidaha dukaamaysiga nashqadeeyayaasha.
Yurub waa mid ka mid ah qaaradaha ugu jaban ee laga adeegto.
Wadamada Bariga Aasiya waxay ka mid yihiin wadamada ugu qaalisan ee laga iibsado qalabka naqshadeeyayaasha.
Si aad u dhiirrigeliso halkaad u dalxiis tagi lahayd ka dib COVID, khubarada warshadaha safarka ee Boqortooyada Midowday waxay falanqeeyeen qiimaha agabyada moodada raaxada ah ee adduunka oo dhan, si ay u muujiyaan waddamada ugu raqiisan (uguna qaalisan) ee ka iibsada naqshadaha ugu caansan, Chanelhalyeeyga 2.55 ilaa kan Cartier Jaceyl Jaceyl
USA waa mid ka mid ah wadamada ugu raqiisan iibsashada moodada naqshadeynta, oo ay ku jiraan afar ka mid ah waxyaabaha raaxada leh ee liiska ku jira, oo ay ku jiraan Chanel 2.55 iyo Jaangooyo Cartier Love, oo ku kacaysa ugu yar USA. Xaqiiqdii, waad keydin kartaa ilaa £ 4,813 adigoo ka dukaameysanaya gudaha Mareykanka marka la barbar dhigo dibadda.
Yurub waa mid ka mid ah qaaradaha ugu raqiisan dukaamaysiga, 5 ka mid ah 12-ka waddan ee ugu jaban Yurubta. Waad keydin kartaa ilaa £ 700 adiga oo u safraya Yurub si safarkaaga raaxada aad ugu adeegato alaab ay ka mid yihiin bacda Fendi Canvas Baguette iyo Louboutins New Very Prive.
Wadamada Bariga Aasiya waxay ka mid yihiin wadamada ugu qaalisan ee laga iibsado qalabka naqshadeynta, 9 ka mid ah 12-ka meelood ee ugu qaalisan ee laga iibsado moodada raaxada oo ku taal Bariga Aasiya. Waxaa jira arrimo kala duwan oo laga yaabo inay gacan ka geystaan ​​tan, oo ay ku jiraan canshuuraha lagu hayo alaabada shisheeye ee raaxada ah ee Shiinaha, sicirka sarrifka oo macnaheedu yahay Yuan wuxuu ka sarreeyaa lacagaha kale ee waaweyn iyo baahida sare ee alaabada naqshadeeyayaasha ee Shiinaha iyo Koonfurta Aasiya.
Meelaha ugu raqiisan uguna qaalisan si loo iibsado moodada naqshadeeye
Louis Vuitton Speedy 25 boorso
Meesha ugu raqiisan ee la iibsado: Danmark - 6,600 DKK (£ 765)
Meelaha ugu qaalisan ee wax lagu iibsado: New Zealand - NZ $ 1,940 (£ 999)